SFX ဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲဒီး တႈမၚသီထီဥက့ၚတႈမၚလိဒီး တႈအိဥသဒ႕သးလ႕ဎြၚအပူၚတႈကစီဥ (လါဖ့ၾဘူးအါရံၚယ ၇ယ၂၀၂၀) | Radio Veritas Asia
SFX ဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲဒီး တႈမၚသီထီဥက့ၚတႈမၚလိဒီး တႈအိဥသဒ႕သးလ႕ဎြၚအပူၚတႈကစီဥ (လါဖ့ၾဘူးအါရံၚယ ၇ယ၂၀၂၀)
ထံလီႈကီႈပူၚ တႈကစီဥတခါလ႕ အမ့ႈ၀ဲ (The Congregation of St. Francis Xavier Sister ) ဖံ၀ါ တႈကရ႕ကရ႕ တခါအံၚ အိဥ၀ဲဒီး တႈမၚသီထီဥက့ၚ တႈမၚလိဒီး တႈအိဥသဒ႕သးလ႕ဎြၚအပူၚ တႈကစီဥ’
(The Congregation of St. Francis Xavier Sister ) ဖံ၀ါ တႈကရ႕ကရ႕ အံၚ ကိးမုဥနံဥဒဲး ဒ္အ၀ဲသ့ဥ မၚညီနုႈ၀ဲ တနံဥတဘ်ီ အိဥ၀ဲဒီး တႈမၚသီထီဥက့ၚ၀ဲ (Renewal Course ဒီး Annual Retreat) တႈမၚလိဒီး တႈဟဲက့ၚအိဥ သဒ႕သးလ႕ ဎြၚအပူၚ ဟံန႔ဥသကိး၀ဲတႈဂံႈတႈဘါ လ႕ဎြၚအအိဥအဂ့ႈန႔ဥလီၚ’
ဖဲ လါဎူၚန၀ါရံၚ အသီ (၂၀ယ ၂၀၂၀ )န႔ဥ St. Francis Xavier Sisters ဖံ၀ါလ႕ အ၀ီႈဆံးသ့ဥတဖဥ အိဥလ႕တႈလီႈဎံၚမ့ႈဂ့ၚ တႈလီႈဘူးမ့ႈဂ့ၚ အ၀ဲသ့ဥဟဲက့ၚ အိဥဖွိဥရိဖွိဥလိဏ အသးခဲလ႕ဏဖဲ ကေိမိႈပွႈ (မရါခေီ) ၀့ႈပသံဥ န႔ဥလီၚ’ လါဎူၚန၀ါရံၚ ၂၁”၂၃ယ၂၀၂၀ အနံၚ အိဥ၀ဲ ဒီး တႈမၚသီထီဥက့ၚ တႈမၚလိန လ႕သ႕သီအတီႈပူၚန႔ဥလီၚ’ အဆိကတ႕ႈ ခံသီ ပွၚလ႕ ဟ့ဥတႈမၚလိန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ၀့ႈတကူဥ သီခါကရ႕ႈခိဥ ဟီဥက၀ီၚ ပွၚမၚလိသးလ႕ ကကဲထီဥဘဥ သီခါ ဖေဥစိၚမိၚကေိဖိ အသီခါကေိခိဥ ပႈဒိဥ Fr. Cyprian Aung Win န႔ဥလီၚ’ အ၀ဲသိဥလိပွၚလ႕ အဘဥဃး၀ဲဒီး The Role of Psychology and ongoing formation’လ႕အမ့ႈ၀ဲ ပ၀ဲပကဲပွၚကညီတဂၚ ပတႈအိဥမူ ပတႈအိဥသး မ့ႈတႈမႏုဏလဲဥ ပတႈလိဥဘဥသ့ဥတဖသ မ့ႈမႏုဏလဲဥ ဒီးတႈလ႕အဂၚသ့ဥတဖ အဂ့ႈန႔ဥလီၚ’ ခီဖ်ိလ႕အ၀ဲ အတႈသိဥလိ မၚလိအဃိ ပ၀ဲ ဖံ၀ါဖိသ့ဥတဖဥ တႈလ႕ပတသ့ဥညါနႈပ႕ႈ သ့ဥတဖဥန႔ဥ ပသ့ဥညါနႈပ႕ႈဘဥက့ၚ၀ဲ အါမးန႔ဥလီၚ’ပႈဒိဥဟ့ဥတႈမၚလိ ခံနံၚ၀ံၚအလီႈခံ ပ၀ဲပဖံ၀ါဖိသ့ဥတဖဥ ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥက့ၚ ပႈဒိဥလ႕ တႈစံးဘ်ဳးတႈကတိၚတစဲးတမွံး ဒီးတႈး၀ံဥဖိ တစဲးတမွဲး၀ံၚအလီႈခံ ပဒိသကိး၀ဲ တႈဂီၚတပူၚဃီန႔ဥလီၚ’ လ႕အကတ႕ႈတနံၚ Sr. PhiliP A Phyone ဒ္အမ့ႈ၀ဲ St. Francis Xavier Sisters သ့ဥတဖဥ အခိဥအနႈတဂၚအသိး အနီႈကစႈဒဥ၀ဲ သိဥလိသီလိပွၚစ့ႈကီး လ႕အဘဥဃးဒီး Psychology တႈကူဥသ့ဘဥဃးဒီး တႈဃုသ့ဥညါ မၚလိပွၚကညီ အသူဥအသးအဂ့ႈ န႔ဥလီၚ’တႈမၚသီထီဥက့ၚတႈမၚလိ၀ံၚအလီႈခံ ၂၄သီ ဟါလီၚခီ ၇း၃၀နဥရံဥ (Annual Retreat) တႈအိဥသဒ႕သးလ႕ဎြၚအပူၚ ဘဥတႈစးထီဥ၀ဲဒဥဃုဏဒီး တႈဘူဥထီဥဘါထီဥကိဥဘူဥစီဆွံန႔ဥလီၚ’ တႈအိဥသဒ႕သးလ႕ဎြၚအပူၚ ဎံဏ၀ဲ(၆)သီဒီး လ႕နီႈသးအဂီႈ ဒ္သိးပဒိန႔ႈဘဥ တႈဂံႈတဘါအဂီႈ ပွၚလ႕ဟံဥဂံႈဟ့ဥဘါပွၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ ၀့ႈပသံဥ သီခါကရ႕ခိဥ တႈပႈ ပႈဒိဥ Fr. Bruno န႔ဥလီၚ’တႈအိဥသဒ႕သးလ႕ဎြၚပူၚ ပွဲၚထီဥ၀ဲ (၆)၀ံၚအလီႈခံ လါဎူၚန၀ါရံၚ ၃၀သီ ဟါလီၚခီ ၄း၃၀နဥရံဥ ဘဥတႈမၚလၚကပီၚ ၀ဲ ဖံ၀ါဖိလ႕ အကလဲၚထီဥ၀ဲအပတီႈဆူ ဖံ၀ါလီ Novices and Postulate အပတီႈ အတႈရဲဥတႈက်ဲၚန႔ဥလီၚ’
တႈရဲဥတႈက်ဲၚ၀ံၚအလီႈခံ ဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ မၚကတ႕ႈက့ၚ၀ဲ အတႈအိဥသဒ႕သးလ႕ဎြၚအပူၚဒီး စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥက့ၚ ပႈဒိဥ Fr. Bruno ဒီး မၚလၚကပီၚ၀ဲ ဖံ၀ါလီလ႕ အတီႈ၀ဲဆူ (Novices and postulate) အပတီႈသ့ဥတဖဥ ဃုဏဒီး တႈဟံန႔ႈ၀ဲဟါတႈအီဥန႔လီၚ’